Digital Camera Trail, fihazana Camera, Hunting Camera Trail - Kinghat
Fakan-tsary fakantsary fihazana fototra
3G mihaza fakan-tsary
4G mihaza fakan-tsary
Shenzhen Kinghat Technology Co., Ltd. naorina tamin'ny taona 2009, hita ao Bao, 'ny Shenzhen, dia matihanina mpanamboatra anjara amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana, fivarotana sy ny fanompoana ao Consumer vokatra elektronika sy ny Smart mpanaramaso.
hijery ny famoriam-bola
isaky ny indray mipi-maso ny hazavana ho an'ny
Inona no atao hoe fakan-tsary mihaza: fakan-tsary fampiasa natokana ho an-tsaha
Raha miresaka fakan-tsary mihaza dia mety olona maro no mbola tsy naheno an'io. Mpivady nomerika maro no mihevitra fa ny fakantsary dia fakantsary nomerika sy SLR ihany. Akaiky kokoa ny trano, fakan-tsary mihaza, araka ny anarany, dia fakan-tsary manokana natao hihaza any an'ala. Raha ny laika, raha fantatrao fa ...
LCD avo lenta mandeha ho azy lehibe mampiseho rindrina malalaka mitaingina thermometer
16MP 4G 48 * 940nm LEDS 0.25s dia miteraka IP66 Tsy misy fakan-tsary mihaza alina
Ianareo ny mifandray US HERE
©Kinghat Outdoor Products.All Rights Reserved. 粤ICP备2020123259号 Nasongadina Products , Sitemap , Mobile Site
Hunting Thermal Vision Camera , Trail Mihaza Camera , Waterproof Trail Camera, Camera , Trail Camera Infrar , 12mp Infrared Led Wildlife Camera ,